Izintaba-mlilo eNyakatho Melika | Izindaba Zokuhamba
UMariela Carril | | América, Canada, Izindawo zokuvakasha, United States, I-México, Ukuzilibazisa
Izintaba-mlilo ziwubufakazi bokuthi iplanethi yethu iyaphila okwamanje. Intuthu, umagma, udaka, amagesi, nomlotha wentaba-mlilo kuvela kulezi zimbobo ezisemgqeni woMhlaba, konke kuvela enhliziyweni yoMhlaba. Kunezintaba-mlilo ezingasekho, kunezintaba-mlilo ezingasebenzi, futhi kunezintaba-mlilo ezisebenzayo. Abantu sebejwayele izintaba-mlilo kodwa bayazi ukuthi bangadala kanjani ukubhujiswa okuningi.
Uma ucabanga ukuthi ziyingozi kangakanani, awuqondi ukuthi bangaba kanjani abantu abahlala eduze kwentaba-mlilo, kodwa kunjalo. Kunamadolobha aphelele akhiwe phansi kwezintaba-mlilo ezisasebenza. Uma zibangele izinhlekelele emadolobheni ezinabantu abangamakhulu kuphela, zingabangelwa yini edolobheni lanamuhla? ENyakatho Melika kunezintaba-mlilo eziningi: eCanada kunezingu-21 kanti e-United States kunezingu-169, ezingama-55 zazo zibhekwe kakhulu, kanti eMexico kunezingu-42.
Iqiniso yilokho kunezintaba-mlilo eziningi eNyakatho Melika futhi amaningi ayasebenza yize engakaqhumi okungenani ikhulu nesigamu. Yingakho ungezwa okuningi ngezintaba-mlilo zaseNyakatho Melika. Cabanga ukuthi ngekhulu lama-1915 kwaqubuka ezimbili kuphela: uLassen ngo-1980 no-St. Helens ngo-XNUMX. Kuyafaneleka ukusho ukuthi izintaba-mlilo eziningi ezikulengxenye yeMelika zisogwini olusentshonalanga, ogwadule lwasePacific lapho iya ngaphansi kwepuleti lase-Continental tectonic.
1 Izintaba-mlilo e-United States
2 Izintaba-mlilo eCanada
3 Izintaba-mlilo eMexico
Izintaba-mlilo e-United States
Ezintabeni-mlilo eziyi-169 ezikhona i-United States, zingama-55 ezibonwayo kanti eziyi-18 zithathwa "njengesixwayiso" mhlawumbe ngoba zingaqhuma, zidale ukuzamazama komhlaba noma zithinte izimpilo zabantu abaningi ababazungezile. I-Alaska inezintaba-mlilo eziningi futhi, futhi eziningi zazo ziseziQhingini zase-Aleutian. Enye yazo, iMount Akutan, yakhipha udaka nomlotha izinyanga ezintathu ngo-1992. Ngokushesha okukhulu, ngo-2005, kwaba nokuzamazama komhlaba e-volcano ka-Augustine nokuqhuma kwamakhilomitha ayisishiyagalolunye ukuphakama. Enye yezintaba-mlilo eziqubukayo zase-Alaska iMakushin, eziqhingini ezifanayo: yaqhuma izikhathi ezingama-34 eminyakeni engama-250, eyokugcina ngo-1995.
Iqhubeka ne-Alaska yiMount Redoubt, ebisebenza ngo-2009 futhi iphoqe isikhumulo sezindiza i-Anchorage ukuthi sivalwe amahora angama-20. Intaba-mlilo enkulu kunazo zonke eziqhingini zase-Aleutian yiMount Spurr, ebimboza i-Anchorage ngomlotha ngo-1992 yize okwamanje ithule. Intaba-mlilo iLassen Peak yaqhuma ngentshiseko enkulu ngo-1915 futhi umlotha wagezwa waze wafika eNevada. Kude ne-Alaska, kunezintaba-mlilo eziningi eCalifornia: iLong Valley Caldera ibilokhu idlala kusukela ngama-90s ngakho-ke nganoma yisiphi isikhathi ungalala noma uvuke. Enye intaba-mlilo yaseCalifornia yiNtaba iShasta, kepha selokhu kwaphela ikhulu le-XNUMX ibiziphethe kahle.
E-Oregon kunezinye izintaba-mlilo ezingalele kangako kanti ezinye zazo zenze uchungechunge olubizwa ngokuthi yiDeveli's Chain. Esifundazweni saseWashington kukhona nezintaba-mlilo: kukhona iMount Baker, egadiwe kakhulu selokhu yabonwa imagna ngo-1975. Enye intaba-mlilo eseduzane iGlacier Peak, iMount Rainier kanye nentaba-mlilo edume kakhulu futhi enye yezintaba-mlilo ezidume kakhulu emhlabeni, iSanta Helena. Le ntabamlilo yaqhuma ngo-1980 yabulala abantu abangu-57.
Ekugcineni, akunakwenzeka ukukhuluma ngezintaba-mlilo zaseNyakatho Melika nezintaba-mlilo zaseMelika ikakhulukazi ngaphandle kokuqamba igama elithi Izintaba-mlilo zaseHawaii. Intaba-mlilo yaseKilauea sekuphele iminyaka engamashumi amathathu iqhuma njalo futhi iyingozi ngokugcwele. IMauna Loa yizwi elikhulu kakhulu elisebenzayo emhlabeni, laqhuma ngo-1984 futhi manje libhekene nomsebenzi oyingozi.
ICanada inezintaba-mlilo ezindaweni eziningi zayo: e-Alberta, eBritish Columbia, eLabrador Peninsula, eNorthwest Territories, e-Ontario, eNunavut, eQuebec, eYukon naseSaskaychewan. Babalwa cishe ngama-21 futhi phakathi kwabo singabala iFort Selkirk, i-Atlin, iTuya, i-Heart Peaks, i-Edziza, iHoodoo Mountain neNazko, isibonelo.
IFort Selkirk iyinsimu entsha kakhulu yentaba-mlilo enkabeni yeYukon. Kuyisigodi esikhulu esakhiwa empambanweni yeziphambeko ezimbili. Ukuqhuma okuqhubekayo kuye kwakha izigaxa ezinhlanu. I-Atlin ingenye intaba-mlilo encane kodwa iseBritish Columbia. Namuhla isigaxa esiphakeme kakhulu singamamitha ayi-1800 ukuphakama. UTuya usezintabeni zaseCassiar, enyakatho yendawo efanayo, futhi usukela ku-Ice Age. I-Heart Peaks intaba-mlilo yesithathu ngobukhulu kulesi sifundazwe saseCanada edume kakhulu ngezintaba-mlilo zayo, futhi yize ingakaze iqhume kusukela eminyakeni yokugcina yeqhwa, iyamangalisa.
I-Edziza iyi-stratovolcano enkulu ebisakhiwa iminyaka eyizigidi. Inenkambu yeqhwa ebangeni elingamakhilomitha ama-2 ububanzi futhi imikhondo yokunyakaza kwayo inendawo. IHoodoo Mountain isenyakatho yoMfula i-Iskut, esifundazweni esifanayo. Yakhiwa nge-Ice Age futhi inokhephu weqhwa phakathi kwamakhilomitha amathathu kuya kwamane ubukhulu, ngenhla, endaweni ephakeme ngamamitha ayi-1750. Ngakho-ke, yakha izinguzunga zeqhwa ezimbili. Futhi ekugcineni, iNazko: yintaba-mlilo encane, enesigaxa sama-fumaroles amathathu, futhi naseBritish Columbia, maphakathi nesifundazwe futhi cishe amakhilomitha angama-75 ukusuka eQuesnel. Ngokusho kososayensi, akukaze kuqhume iminyaka engu-5220.
Lezi akuzona kuphela izintaba-mlilo eCanada, kepha kufanelekile isampula ukwazi ukuthi kuneziningi nokuthi izintaba-mlilo eziningi zaseCanada ziseBritish Columbia.
Izintaba-mlilo eMexico zigxile eBaja California, enyakatho-ntshonalanga yezwe, eziqhingini, entshonalanga, enkabeni naseningizimu. Bangu izintaba-mlilo ezingama-42 eseMexico futhi cishe zonke zitholakala endaweni ebizwa ngokuthi yiPacific Ring of Fire. Izintaba-mlilo ezisebenza kakhulu yiColima, i-El Chichón nePopicatepetl. Lapho i-El Chichón, eChiapas, iqhuma ngo-1982, ngokwesibonelo, yapholisa isimo sezulu emhlabeni ngonyaka olandelayo futhi ithathwa njengenhlekelele yentaba-mlilo ebaluleke kakhulu emlandweni wanamuhla waseMexico.
Intaba-mlilo IColima noma iVolcán de Fuego iyingxenye yenkimbinkimbi yentaba-mlilo eyakhiwa yileyo ntaba-mlilo, iNevado de Colima nenye eqhume kakhulu ebizwa nge-El Cántaro, engasekho. Omncane kulaba abathathu uthathwa njengentaba-mlilo esebenza kakhulu eMexico nakuyo yonke iNyakatho Melika, ngoba iqhume izikhathi ezingamashumi amane kusukela ngasekupheleni kwekhulu leshumi nesikhombisa. Yingakho indawo ibhekwa amahora angama-24 ngosuku.
Njengoba sibona, INyakatho Melika inezintaba-mlilo eziningi Futhi yize kungezona izindaba nsuku zonke ngokuthile ososayensi bakulawa mazwe amathathu baningi ababhekiwe. Ukuqhuma kwentaba-mlilo kuyamangalisa, kuyiplanethi ephilayo ngakho konke ukukhuluma kwayo, kodwa namuhla, nabantu abaningi kangaka abahlala emhlabeni, ukuqhuma okukhulu kakhulu kungadala izinkinga eziningi nomonakalo.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » América » Canada » Izintaba-mlilo eNyakatho Melika
i-salami eningi kakhulu yangiphakela naaa mentrira ayingiphakelanga ngigula, kufanele ufe ugula
Lokhu kuyasiza ngoba uyakhononda, uyavilapha, yenza umsebenzi wakho wesikole, ulahle !, futhi uma ungawuthandi, funa amanye amakhasi, ungagxeki, kukwenzela okuthile, UMSEBENZI OMUHLE !!
ibalazwe liyadingeka endaweni elikuyo, ngoba akuyona eyabafundi base-US kuphela
yebo cha ukuthi abafundi baseLATIN AMERICA bayayisebenzisa
Hamba ngomzila we-Ebro
Izibani zaseNyakatho, ziyini futhi singazibona kuphi?